Home / रोचक / एउटा सानो सुपारीको दानाले घरमा भित्रिन्छ सम्पति, बनाउँछ धनी आखिर कसरी ?
एउटा सानो सुपारीको दानाले घरमा भित्रिन्छ सम्पति, बनाउँछ धनी आखिर कसरी ? 0
पूजा गर्ने र खाने सुपारी भिन्ना भिन्नै हुन्छ । खाने सुपारी ठुलो हुन्छ भने पूजा गर्ने सुपारी सानो हुन्छ । सुपारी बडी खाने मानिसहरु प्राय सुपारिलाई पानमा लगाएर खाने गर्दछन।
बास्तुशास्त्रले सुपारिको बारेमा धेरै कुराहरु भनेका छन मानिन्छ कि मन्त्रको सहयोगको साथ घरमा सुपारी राखे सकारात्मक ऊर्जा घरभित्र प्रबेश गर्दछ भने खुशी -सम्रिद्धी आउनेछ । एउटा सानो सुपारिले तपाईंलाई धनी पनि बनाउन सक्दछ।
धर्मशास्त्रको अनुसार सुपारीलाई पूजा गरेर उसलाई सिद्ध अथवा अभिमंत्रित गर्नको लागि शुभ मुहुरतामा एउटा पहेंलो वा रातो कपडा राखेर गणेशभगवान लाई पूजा गर्नुस् साथै अधुवा,चामल लाई पूजा गरेर लक्ष्मी मन्त्र जप्नुस् धर्मशास्त्रको अनुसार सुपारिको बिधिबिधानले चमत्कारपूर्ण परिणाम मिल्दछ। जोसँग एउटा सिद्ध सुपरी हुन्छ तेस्ता ब्यक्तिलाई पैसाको कमी कहिले पनि हुँदैन र उस्को खल्तिमा पोइसा कहिले पनि टदैन ।